ShokoPress rakabviswa? Matanho Gumi Ekugadzirisa Yako Blog | Martech Zone
ShokoPress rakabviswa? Matanho Gumi Ekugadzirisa Yako Blog
Chipiri, April 27, 2010 Chitatu, November 5, 2014 Douglas Karr
Shamwari yangu yakanaka nguva pfupi yadarika akawana yake WordPress blog kubiwa. Kwaive kurwisa kwakaipisisa uko kwaigona kukanganisa maitiro ake ekutsvagisa, uyezve, kukurumidza kwake munzira. Ndicho chimwe chezvikonzero nei ndichipa mazano kumakambani makuru kuti ashandise yehukama blogging chikuva senge Kuwedzera - uko kune timu yekutarisisa inokutsvaga iwe. (Kuzivisa: Ini ndiri mugovani)
Makambani haanzwisise kuti sei vachizobhadhara chikuva senge Compendium… kudzamara vandiroja kuti ndishande husiku hwese ndichigadzirisa yavo vakasununguka WordPress blog! (FYI: WordPress zvakare inopa a VIP vhezheni uye Typepad inopawo a Shanduro yebhizinesi. )
Kune avo venyu vasingakwanise kuwana blogging chikuva nemasevhisi avanopa, heano mazano angu ezvekuita kana WordPress ikabiwa:
Dzikama! Usatanga kudzima zvinhu uye nekuisa ese marudzi echipenga anovimbisa kuchenesa kuiswa kwako kumusoro. Iwe hauzive kuti ndiani akazvinyora uye kuti kana kwete kana zviri kungo wedzera zvimwe zvisirizvo zvisina kunaka kublog rako. Tora mweya wekufema, tarisa iyi blog post, uye zvishoma nezvishoma uye nemaune enda pasi pekutarisa.
Tora pasi iyo blog. Pakarepo. Nzira iri nyore yekuita izvi neWordPress ndeyekuti Rename yako index.php faira mune yako dhairekitori. Hazvina kukwana kungoisa index.html peji… iwe unofanirwa kumisa traffic yese kune chero peji reblog rako. Mukuiswa kweiyo index.php peji rako, isa faira reruzhinji rinoti hauchina zvekuchengetedza uye uchadzoka nekukurumidza. Icho chikonzero iwe chaunoda kutora pasi iyo blog ndechekuti mazhinji eaya hacks haana kuitwa nemaoko, iwo anoitwa kuburikidza neanonyora magwaro anozvisungirira iwo ega kune ese anonyorwa faira mune yako yekuisa. Mumwe munhu anoshanyira peji remukati reblog rako anogona kudzoreredza mafaera auri kushanda kugadzirisa.
Backup yako blog. Usango chengeta mafaira ako, uyezve dura rako re database. Chengeta pane imwe nzvimbo yakakosha mune chiitiko chaunoda kutarisa kune mamwe mafaera kana ruzivo.
Bvisa madingindira ese. Themes inzira dziri nyore kune wekubira kunyorera uye kuisa kodhi mune yako blog. Mazhinji madingindira akanyorwawo zvisina kunaka nevagadziri vasinganzwisise nuances ekuchengetedza mapeji ako, kodhi yako, kana dhatabhesi rako.
Bvisa plugins ese. Mapulagi ndiyo nzira dziri nyore dzekuti hacker itore script uye isa kodhi mune yako blog. Mazhinji plugins akanyorwa zvisirizvo nevanogadzira hack vasinganzwisise nuances ekuchengetedza mapeji ako, kodhi yako, kana dhatabhesi rako. Kamwe mukobvu paakawana faira ine gedhi, ivo vanongotumira vanokambaira vanotsvaga mamwe masayiti emafaira iwayo.
Dzorerazve WordPress. Kana ndati dzosera WordPress, ndinoreva - kusanganisira dingindira rako. Usakanganwa wp-config.php, iyo faira isina kunyorwa paunoteedzera pamusoro peiyo WordPress. Mune ino blog, ini ndawana iyo yakaipa script yakanyorwa muBase 64 saka yaingotaridzika kunge bhurogi remavara uye yakaiswa mumusoro wepeji rega rega peji, kusanganisira wp-config.php.
Wongorora yako Dhatabhesi. Iwe uchazoda kuongorora zvaunogona kusarudza tafura uye ako maposita tafura kunyanya - kutsvaga chero kusanzwisisika kwekunze mareferenzi kana zvemukati Kana usati wambotarisa kune yako dhatabhesi kare, gadzirira kuwana PHPMyAdmin kana imwe dhatabhesi yemubvunzo maneja mukati memubati wako wevatariri. Hazvinakidze - asi zvinofanirwa.
Kutanga WordPress ine default theme uye hapana plugins akaisirwa. Kana zvirimo zvako zvikaonekwa uye iwe usingaone chero otomatiki anodzoreredza kune yakaipa nzvimbo, iwe unogona kunge wakanaka. Kana iwe ukawana redirect kune yakashata saiti, iwe ungangoda kuda kubvisa yako cache kuti uve nechokwadi chekuti uri kushanda kubva yazvino kopi yeiyo peji. Iwe ungangoda kuenda kuburikidza neako dhatabhesi rekodhi nerekodhi kuyedza kutsvaga chero zvirimo zvingave zviripo zviri kuvhura nzira kupinda yako blog. Mikana dhatabhesi yako yakachena… asi iwe hauzive!
Isa Chinyorwa Chako. Kana iyo yakaipa code yakadzokororwa, pamwe unenge uine theme ine hutachiona. Iwe ungangoda kuenda nemutsetse netambo kuburikidza netimu yako kuti uone kuti hapana yakaipa code. Iwe unogona kunge uri nani pane kungotanga nyowani. Vhura iyo blog kusvika kune positi uye uone kana uchiri kutapukirwa.
Isa Mapulagi Ako. Iwe ungangoda kushandisa plugin, kutanga, senge Yakachena Sarudzo Kutanga, kubvisa chero sarudzo dzekuwedzera kubva kuma plugins ausisiri kushandisa kana kuda. Usapenga zvakadaro, iyi plugin haisi yakanakisa ... inowanzo kuratidza uye inokutendera kuti ubvise marongero aunoda kusungirira paari. Dhawunirodha ma plugins ako ese kubva kuWordPress. Mhanya bhurogu yako zvakare!
Kana iwe ukaona iyo nyaya ichidzoka, mikana ndeyekuti iwe wakadzoreredza plugin kana theme iyo iri nyore. Kana iyo nyaya ikasasiya, iwe pamwe wakamboedza kutora mapfupi mapoto mukutambudza idzi nyaya. Usatora nzira pfupi.
Aya maHacker vanhu vakashata! Kusanzwisisa yega yega plugin uye theme faira inoisa isu tese panjodzi, saka chenjera. Isa mapulagi ane ratings yakakura, kuwanda kwekuisa, uye yakakura rekodhi yekuodhaunirodha. Verenga zvataurwa nevanhu vakabatana navo.
Tags: gadzira wordpresshackedkugadzira wordpressWordPress rakabviswa
Musangano Wako Wepamhepo Unotevera Uripi?
Google Webmaster Central Inowana Yakakomba Kuvandudza
Apr 27, 2010 pa 1: 29 PM
Ndatenda nemazano awataura pano. Ndinoda kubvunza kuti chii kana hacker achingochinja password yesaiti yako. Iwe haugone kana kubatana kune wordpress folda kuburikidza neFTP.
Apr 27, 2010 pa 8: 21 PM
Ndakamboita izvi kare. Nzira iri nyore yekuibata ndeyekuvhura dhatabhesi uye kugadzirisa yako admin email kero. Chinja email kero kukero yako wobva waita password reset. Iyo admin reset inozotumirwa kune yako email kero kwete yevanobira - uye ipapo unogona kuvavharira kunze zvachose.
Apr 27, 2010 pa 9: 52 PM
Zvinhu zvakanaka. Izvi zvichangobva kuitika kune shamwari yangu. Angadai akashandisa mazano ako.
Apr 28, 2010 pa 8: 48 AM
Doug, wakamboona here kuti ndeipi plugin yakashandiswa kupaza?
Mar 24, 2011 pa 6: 52 AM
Ndangowana bhurogi rako ndichitsvaga kugadzirisa saiti yangu yekubira nyaya. Nzvimbo yangu - http://www.namaskarkolkata.com. kamwe kamwe nhasi mangwanani ndaona saiti yangu Palestine Hacker - !! HacKed By T3eS !! . unogona here kutarisa - kuti ndingagadzirisa sei. Vakachinja zita rangu rekushandisa reWordPress nepassword uye zvakare ndichiedza kupora kuburikidza neemail yangu - zvaenda. Ndiri kunzwa kushaya zvekuita. Nditungamirireiwo.
Mar 24, 2011 pa 2: 35 PM
Pane chaizvo nzira iri nyore yekutora back control. Uchishandisa chirongwa senge phpMyAdmin iyo inotakurwa pamasaiti mazhinji, unogona kuenda kune wp_users tafura uye shandura email kero ye admin kudzokera kwauri. Panguva iyo iwe unogona kuita 'kukanganwa password' pachiratidziro chekupinda uye kuseta zvakare password.
Shanda Kubva Kumba 4Life
Aug 21, 2011 pa 1: 27 AM
Mhoro Doug - ndatenda nekugadzirisa uku nekukurumidza… dai ndakaziva nezvazvo mavhiki maviri apfuura apo imwe yemasaiti angu payakabiwa… rutsigiro rwekutambira rwakanga rwuri pedyo nekusabatsira uye ndaifanira kurasa saiti yese & kutanga zvakare! Kutenda kwauri ini handichafanira kuenda nekurwadziwa ikoko zvakare pane yangu yazvino saiti yakabiwa. Chero mazano ekudzivirira hacker? – nekutenda, Dee
Aug 22, 2011 pa 2: 22 AM
Hi Dee - kune mamwe ma plugins kunze uko anovharira chero edits kumafaira ako edingindira. WordPress Firewall 2 imwe yacho. Izvo hazvizogadzirise iyo theme faira pasina iwe kupa mvumo. Zvinorwadza kumurume akaita seni anogara 'achikwenya', asi pamwe iri plugin huru kune mumwe munhu asingadi kuisa njodzi chero munhu kana chero chinyorwa kupinda imomo nekubira saiti yako!
Sep 19, 2011 na10:30 PM
Mhoroi, maita basa netsamba yenyu. Saiti yangu yakabiwa, uye kusvika zvino zvese zvakaitika ndezvekuti ivo vakawedzera vashandisi veWP uye vakatumira matatu mablog blog. Wangu webhu saiti anofunga kuti yaingova "bot" kutyora password yangu yeWP, asi ndiri kunetsekana. Ndakashandura mapassword angu ose, akawedzera password kuchengetedzwa pasi pe .htaccess editor, ndakatsigira mafaira angu eWP, zvinyorwa zvangu zvinyorwa uye zvinyorwa zvangu uye kuisa nzvimbo yacho pasi pekugadzirisa- Zvose mukugadzirira kudzorerazve WP uye musoro wangu. Zvakadaro, izvi zvinhu zvakaoma kune mutsva. Ini ndiri kuvhiringika pakuita zvakachena kudzorera WP uye dingindira rangu- kuti pasave nemafaira ekare anoramba ari pane yangu ftp server. Ini zvakare ndakavhiringika nezve kuongorora dhatabhesi rangu, ndichitarisa matafura angu ese mu phpMYadmin- Ndingatoziva sei yakaipa kodhi? Chinonyanya kunetsa ndechekuti ndinochengeta ese plug ins yangu uye WP kusvika parizvino, pavhiki. Ndatenda nerubatsiro pakujekesa zvese izvi!
Sep 20, 2011 pa 12: 19 AM
Kazhinji yenguva, mafaera ari muwp-zvemukati ayo anowanzo kubiwa. Yako wp-config.php faira ine zvinyorwa zvako uye yako wp-yemukati folda ine dingindira rako uye plugins. Ini ndaizoedza kurodha nyowani WordPress yekuisa uye kukopa pamusoro pezvese asi iyo wp-yemukati dhairekitori. Ipapo iwe uchazoda kuseta zvitupa mune itsva wp-config.php faira (ini ndaisazoshandisa yekare). Ndinobva ndangwarira kushandisa dingindira rimwechete uye maplugins… kana imwe yacho ikabiwa, vanogona kuparadzira nyaya kune vese.
Kodhi yakaipa inowanzokopwa mufaira rega rega uye inoshandisa mazwi senge eval kana base64_decode… vanovharira kodhi uye vanoshandisa iwo mabasa kuitsanangura.
Kana saiti yako ichinge yadzoserwa, unogona zvakare kuisa scanner plugin iyo inoona kana chero midzi mafaera akachinjwa, senge: http://wordpress.org/extend/plugins/wp-security-scan/
Sep 26, 2011 na3:43 PM
Hi Doug! Ndinofunga kuti blog yangu yakabiwa. Ndine simba pamusoro pazvo asi kana ndichida kugovera url yepositi paLinkedIn zita rinoratidza tenga z…. (mushonga) uye handizive zvekuita kana kugadzirisa. Ini zvechokwadi ndinonzwa kusagadzikana nezve kutora pasi bhurogu yangu yese… yakakura !!! Chii chinoitika kana ndikaisa wordpress nyowani pane rimwe dhairekitori uye ndowedzera dingindira, riedze uye kuyedza ma plugins uye ndofambisa zvese zvirimo uye kudzima dhairekitori rekutanga? Izvi zvaizoshanda here? blog yangu url is hispanic-marketing.com (kana iwe uchida kuitarisa) ndinokutendai zvakanyanya !!!
Sep 26, 2011 na3:52 PM
Ini handisi kuona humbowo hwekuti saiti yako yakabiwa. Kazhinji kana saiti yako yakabirwa, dingindira rako rinokanganiswa saka kudzoreredza WordPress hakubatsiri zvachose.
Kukadzi 7, 2013 na4:16 PM
WordPress VIP ine rudzi urwu rwerutsigiro asi rwakaitirwa maindasitiri akakura. Asi ivo zvakare vane chigadzirwa chinonzi VaultPress icho chisingadhure uye chine rutsigiro. Iko hakuna chinhu chakadai se "WordPress" tech rutsigiro. Zano rangu ndere kutambira saiti yako paWPEngine - https://martech.zone/wpe - vane rutsigiro rwakatanhamara, mabhapu ega ega, kuongorora kuchengetedza, nezvimwe. Uye vanomhanya zvakanyanya! Isu takabatana uye saiti yedu inotambirwa pavari!
Kukadzi 22, 2014 na7:47 PM
Hei Douglas, ndinoda kuwedzera kune yako runyorwa se #11. Iwe zvakare unofanirwa kuendesa zvakare webhusaiti muGoogle Webmaster maturusi kuitira kuti vagone kuikwevera zvakare uye vape zvese zvakajeka. Izvi zvinowanzotora maawa makumi maviri nemana chete ikozvino, iyo ipfupi zvikuru kupfuura kare. Imomo zvakatora svondo kukamba zvakare.